७ बार मध्ये यि दिन जन्मेका व्यक्तिले कमाउँछन् अत्याधिक धन ? जान्नुहोस् ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / ७ बार मध्ये यि दिन जन्मेका व्यक्तिले कमाउँछन् अत्याधिक धन ? जान्नुहोस् !
७ बार मध्ये यि दिन जन्मेका व्यक्तिले कमाउँछन् अत्याधिक धन ? जान्नुहोस् !
admin November 12, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 92 Views
बिहिवार: यस दिन जन्मिने पुरुषहरु निकै विद्वान र पराक्रमी हुने गर्छन। विहीबार जन्मिनेहरुलाई ७, १२, १३, १६ र ३० वर्षमा संकट पर्छ । तर ३० वर्ष उमेर नाघे पछि यिनीहरुको भाग्य खुल्ने र सोचेभन्दा बढी धन सम्पति कमाउने अवसर मिल्नेछ।
शुक्रबार : यस दिन जन्मिले व्यक्तिहरु निकै रोमान्चक स्वभावका हुन्छ । उनीहरुको मिठो स्वरले सबैको मन जित्न सफल हुने गर्छ। यस बार जन्मिने व्यक्तिहरुलाई २० र २४ वर्षको उमेर मा दुख कष्ट पर्ने भएपनि आफ्नो कडा मेहेनत र परिश्रमको बावजुद प्रशस्त धन आर्जन गर्न सक्छन।
शनिबार : शनिबार जन्म भएका प्राय: व्यक्तिहरु अर्काको नोकरी भन्दा पनि आफ्नै व्यापार गर्न रुचाउने गर्छन। यिनीहरुको बाल्यकाल केहि कष्टपूर्ण हुने भएपनि त्यसपश्चातको पुरै जीवन खुशी र सुखी बित्नेछ। यस दिन जन्मेका व्यक्तिहरुले २०, २५ र ४५ वर्षको उमेरमा केही समस्याहरु सामना गर्नुपर्नेछ। यिनीहरु प्रशस्त धन आर्जन गर्न सफल हुनेछन्।
Previous टी २० मा पाकिस्तानले जितेको खेल हार्यो, अष्ट्रेलियाले गर्यो अन्तिममा चमत्कार
Next उपचारमा आएका पुरुषहरुको लि” ,ङ्ग देख्दा लाज लाग्छ- महिला डाक्टर !